စစ်ပြန် - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နောက်ဆုံးနေ့နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအမေရိကန်လက်နက်ကိုင်တပ်များမှအထူးအခွန်သက်သာခွင့်များနှင့်အထောက်အကူပြုအရင်းအမြစ်များကို IRS မှသတိပေး
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 8, 2020 ဇူလိုင်လ 7, 2020 Filomena Mealy	မှတ်ချက် Leave
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်ယနေ့စစ်တပ်မှအဖွဲ့ဝင်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှစ၍ ကောက်ခံသောအခွန်အခရာသီပြီးဆုံးချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အထူးအခွန်သက်သာခွင့်များကိုပိုမိုလေ့လာရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အများစုမှာစစ်အခြေစိုက်စခန်းများကိုဆက်ကပ် အခမဲ့အခွန် preparatioand နှင့်အခွန်ပုံစံတင်ပို့သည့်ကာလအတွင်းအကူအညီဖြည့်စွက်ခြင်း။ အချို့ကဇူလိုင်လအခွန်အခတင်သွင်းသည့်နောက်ဆုံးနေ့ပြီးနောက်အခမဲ့အခွန်ပေးဆောင်သည်။ ဤပရိုဂရမ်အချို့သည်လက်ရှိ COVID-19 ၏သက်ရောက်မှုကိုခံရနိုင်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဇြန္လ 30, 2020 ဇြန္လ 30, 2020 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
မင်္ဂလာမသန်စွမ်းသူများစစ်ပြန်နေ့™! ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျင်းပခြင်းသာဖြစ်သည်၊ ယခုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် US တွင်ဇွန်လ 30 ရက်ကျင်းပခဲ့သည် မသန်စွမ်းစစ်ပြန်နေ့™ကို Advocate Greshun De Bouse မှအသိအမှတ်ပြုသည့်အားလပ်ရက်အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမသန်စွမ်းမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုခံနိုင်ရည်နိမ့်ကျသည့်အချိန်တွင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်သေချာစေရန်၊
COVID 19 ကြားတွင်စိတ်ကျန်းမာရေး
မေလ 9, 2020 မေလ 9, 2020 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
မေလသည်စိတ်ကျန်းမာရေးလဖြစ်သည်။ စိတ်ရောဂါခံစားနေရစဉ်ကာလအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြtheနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်မီကျွန်ုပ်သည်“ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရှေ့တန်းအလုပ်သမားများ” အားလုံးကိုခဏတာအသိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Warrior Angels ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားအသိုင်းအဝိုင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများတွင် (နှစ်ပေါင်းများစွာဂီတကုထုံးပံ့ပိုးရန်) စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
စစ်ပြန်ရေးရာ ၀ န်ထမ်းများလက်ခံရရှိသူများသည်အလိုအလျောက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပေးချေလိမ့်မည် - ဘဏ္Treာရေး၊ IRS၊ VA (IR-2020-75) အကြားတွင်လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 18, 2020 ဧပြီလ 18, 2020 Filomena Mealy	မှတ်ချက် Leave
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဘဏ္asာရေးဌာနနှင့်စစ်ပြန်ရေးရာဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ VA အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလက်ခံရရှိသူများသည်အလိုအလျောက်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ VA မှလျော်ကြေးငွေနှင့်ပင်စင်လစာ (C&P) အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလက်ခံရရှိသည့်စစ်မှုထမ်းများနှင့်သူတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုဒေါ်လာ ၁,၂၀၀ စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ဘက်မှထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ငွေပေးချေရမည့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
Coronavirus Stress ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း - စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့်အခြားသူများအတွက်အကြံဥာဏ်
ဧပြီလ 11, 2020 ဧပြီလ 10, 2020 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်တော်ကအသုံးမကျဘူးလို့ခံစားမိတယ်၊ ဒါကငါ့အသား 20 ပေးဖို့ကြိုးစားနေတစ်ခုခုငါ့အနှစ် XNUMX အားပေးမှုငါ့ retort ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကနေအဖျားရောဂါလက္ခဏာပြနေတယ်ဆိုတာကိုသိတော့ချက်ချင်းပြန်လည်စတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ Heck, ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးရည်ညွှန်းဘောင်မှာစတင် ... မသေချာမရေရာ။
ရဲစွမ်းသတ္တိသရုပ်ပြဇာတ်ကောင် - The COVID 19 Battle
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 1, 2020 မတ်လ 31, 2020 ဒါန Matthews	1 မှတ်ချက်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏ (၂၁) နှစ်အရွယ်သားကို“ ဒါဟာကျွန်မတို့ပုံမှန်ခံစားလာရမယ့်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟုပြောခဲ့သည် သူ၏တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ပြီးသည့်အခါ“ အနည်းဆုံးခဏ” ဟုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ကိုလျော့ကျစေခဲ့သည်။ Baby Boomers နှင့်အထက်အတွက် COVID 21 Pandemic သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၉/၁၁ ကိုအမှတ်ရစေပြီးစက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်သတိရစေသည်။ သင်သိသည်၊ အရာရာတိုင်းသည်နောက်ဆုံးသောကာလပြောင်းလဲသွားသည်။
စစ်ပြန်အပေါ် Coronavirus ၏စိတ်ပညာသက်ရောက်မှု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 22, 2020 မတ်လ 21, 2020 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) ဖြစ်ပွားခြင်း AKA“ The Coronavirus” သည်လူများအတွက်အလွန်စိတ်ဖိစီးသောရောဂါဖြစ်သည်။ ရောဂါတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့သည်အလွန်ကြီးမားပြီးလူကြီးများနှင့်ကလေးငယ်များတွင်ပြင်းထန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းကသင်၊ သင်ချစ်ရသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်အထောက်အကူပြုသည်။ စစ်ပြန်များအတွက်, ဒီအကျပ်အတည်းနှစ်ဆစိန်ခေါ်မှုနိုင်ပါတယ်။
မတ်လ 2, 2020 မတ်လ 1, 2020 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
ငါဟာအမျိုးသမီးစစ်ပြန် WellCare တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ထောက်ခံအားပေးသူ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာကျွန်တော့်အမေနဲ့အဖေနှစ် ဦး စလုံးစစ်တပ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်ရေးဘွတ်ဖိနပ်တွေ ၀ တ်ခဲ့ဖူးတဲ့မိသားစုကပါ။ ပို၍ တိကျစွာပြောရရင်ကျွန်တော့်အမေ၊ ပုဂ္ဂလိကအန်းမီလာဟာအမျိုးသမီးစစ်တပ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှာအမှုဆောင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် ၂၆ နှစ်အမေရိကန်ကြည်းတပ်မှအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်ုပ်ကိုထူးခြားသောရှုထောင့်တစ်ခုပေးသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 8, 2020 ဇန်နဝါရီလ 7, 2020 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
နှစ်သစ်ကူး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့စိတ်ပညာရှင်အများစုကထိန်းသိမ်းထားသည်။ တကယ်တော့မင်းရဲ့ဘဝကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်မင်းဒါကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပြီးပြီလား။ အမှန်မှာ၊ နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်သည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ တကယ်တော့၊ အချို့သောလေ့လာမှုများအရနှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းသောအမေရိကန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်ဂဏန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။
မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များနေ့တည်ထောင်သူ Greshun De Bouse သည်သမ္မတ Trump အားလှုံ့ဆော်ခဲ့သလား။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2019 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
ငါတို့ရှိသမျှသည်သူ့ကိုသိတယ်။ Greshun De Bouse ကိုမချစ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ သူမသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံများ၊ မသန်စွမ်းသူစစ်ပြန်များနှင့်လိုအပ်နေသည့်အခြားအုပ်စုများအတွက်အခြေအနေများကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ Greshun သည်သူမ၏မြို့တော်ဝန်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ကျော်ကြားမှုများနှင့်အခြားထင်ရှားကျော်ကြားသူများ၏ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်.
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
ယခုခရစ်စမတ်အစဉ်အလာအတွက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်တစ် ဦး တည်းဖြတ်မရတဲ့ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်ပါပဲ ခရစ်စမတ်မတိုင်မီစစ်သား၏ည.
ငါမပြုမီ, ငါရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဘို့အခဏယူလို။ ဝါရင့်စစ်တပ်ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုဟာတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေသူ၊ အရန်သို့မဟုတ်အမျိုးသားအစောင့်အရှောက်မှအနားယူပြီးနောက်သို့မဟုတ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်တာ ၀ န်ရှိသူတစ် ဦး အတွက်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ၀ န်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်ကငါတို့ကိုချည်နှောင်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်နွယ်မှုများကိုဂျာကင်အင်္ကျီများ၊ ဦး ထုပ်များ၊ ရှပ်အင်္ကျီများ၊
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 10, 2019 နိုဝင်ဘာလ 8, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
စစ်ပြန်များနေ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါ့အဘို့ခက်ခဲသည်။ ယခုနှစ်စစ်ပြန်နေ့အထူးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သာမန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သာမန်အလုပ်များနှင့်အလုပ်များနေပြီးprojectရာမစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်မိမိကိုယ်ကိုနစ်မြုပ်နေစေနိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့, ငါဘယ်တော့မှပျင်းရိဖြစ်၏။ နှစ်အနည်းငယ်ငါစစ်ပြန်နေ့အခမ်းအနားများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ တခါတရံမှာကျွန်တော်ဟာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုသီဆိုပေးတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်ငါအဆက်အသွယ်အားလုံးရှောင်ကြဉ်ပါပြီ။
Greshun De Bouse သည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှသမိုင်းဆိုင်ရာကြေငြာခြင်းအတွက် Alabama ပြည်နယ်ပြည်နယ်ပါလီမန်အဆောက်အအုံတွင်ဖိတ်ကြားခံရသည်
အောက်တိုဘာလ 25, 2019 အောက်တိုဘာလ 25, 2019 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
Montgomery, AL - Greshun De Bouse သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏သဘာဝလွန်သွေးဆောင်မှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုအမြဲတမ်း“ နိုးကြား” စေသည်။ အခုတော့ဒီမရပ်တန့်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်“ နိုး” လိုက်တယ်။ အားလုံးအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ! မြောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်၊ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း၊ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်နေရာအနှံ့အပြားတွင်လူတိုင်းပြောနေတာအားလုံးသည်ပုံရသည် မသန်စွမ်းစစ်ပြန်နေ့™ - အထူးသဖြင့်မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များအတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းဆိုင်ရာအထူးအားလပ်ရက်ဖြစ်ပြီးသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမသန်စွမ်းမှုလိုအပ်ချက်များအားလုံးအားအတားအဆီးကင်းမဲ့သည့်အချိန်တွင်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားသည်။ လက်ျာဘက်, ကြောက်မက်ဘွယ်အသံ? (ဟုတ်ပါတယ်) ကောင်းပြီ, ၎င်း၏တည်ထောင်သူအဖြစ်ကောင်းစွာလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်ပါ!
မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များနေ့™တည်ထောင်သူ Greshun De Bouse သည်မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်လုပ်ငန်းစဉ်အားလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်သမ္မတ Trump ၏ဆန္ဒပြမှုကိုလက်ခံခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 20, 2019 အောက်တိုဘာလ 20, 2019 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
Dallas, TX - မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များနေ့™တည်ထောင်သူ Greshun De Bouse သည်သူမအနေဖြင့်“ America's Great America” ပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ရန်သမ္မတ Trump မှသူမ၏“ စာသားအရ” ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာအမေရိကန်လေကြောင်းဌာနမှ 17၊ 2019။ မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုအကျွမ်းတဝင်မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်ထောက်ခံသူ, Greshun De Bouse Trump ကသူက "လုံးဝနှင့်အပြီးအပိုင်" သောမှတဆင့်ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့သည်ကြေငြာသောအခါ, ပီတိအံ့သြသွားတယ် မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်ကျောင်းသားချေးခွင့်လွှတ်ခြင်း။ De Bouse သည်အမေရိကန်ပြည်နယ် ၅၀ ရှိမသန်စွမ်းသူစစ်မှုထမ်းများအားသူတို့၏သက်ဆိုင်ရာ VA ရုံးများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ "သမ္မတ Trump ၏အလိုအလျောက်ကျောင်းသားချေးငွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောမသန်စွမ်းသူလူ ဦး ရေအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ "
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 3, 2019 အောက်တိုဘာလ 2, 2019 က Norton R. Nowlin	1 မှတ်ချက်
မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်စွန့်စားရမည့်ဝါရင့်ကိုပုံဖော်သည့်လက်တွေ့မြင်ကွင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းတွင်၊ DVA / VHA 1.3 ပတ် ၀ န်းကျင် မှစ၍ VA Suicide Prevention ကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည့် $ 2012 ဘီလီယံကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်အမေရိကန်စစ်ပြန်ရေးရာဌာနမှလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တင်ပြနေသောပရိုဂရမ်သည်။
Dual Lean ခြောက် Sigma အစိမ်းရောင်နှင့်စစ်ပြန်များအတွက် Black Belt ခါးပတ်အစီအစဉ်
စက်တင်ဘာလ 28, 2019 စက်တင်ဘာလ 27, 2019 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်	မှတ်ချက် Leave
ငါ့အတွက်ဘာအခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်မလဲ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းတက်ရန်လျှောက်ထားသင့်သလား။ ဤရွေ့ကားဝါရင့်မိမိကိုမိမိစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုမေးလိမ့်မယ်မေးခွန်းများကို၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ကြသည်။ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ် ဦး သည်စစ်ရေးပုံစံမှအရပ်သားပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြောင်းလဲရန်မလွယ်ကူပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးစဉ်ကာလအတွင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများရရှိခဲ့သောအရည်အချင်းနှင့်အရည်အချင်းအချို့တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသင်းအဖွဲ့၊ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ အချိန်တိကျမှု၊ အသေးစိတ်အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ခွန်အား၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသောဆက်သွယ်ရေး၊ ဤရွေ့ကားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကသူတို့ရဲ့န်ထမ်းထဲမှာကြည့်ဖို့ကိုချစ်မယ်လို့အရည်အသွေးတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်စိန်ခေါ်မှုမှာဤအရည်အချင်းများကိုအရပ်ဘက်ဘာသာစကားဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်မည်သို့ပြသမည်နည်း။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များအပေါ်သင့်အားအဘယ်အရာကထိပ်ဆုံးသို့ ဦး တည်စေနိုင်သနည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 28, 2019 စက်တင်ဘာလ 27, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်“ စစ်မှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး” နှင့်“ ဝါရင့်” များအကြား (ရှိခဲ့လျှင်) ခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်ဝါရင့်သို့မဟုတ် vet ဟူသောဝေါဟာရကိုတက်ကြွသောတာဝန်၊ သမ္မတအေဗရာဟမ်လင်ကွန်းသည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနှင့်သူ၏မုဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးကိုဂရုစိုက်ရန်စစ်မှုရေးရာဌာန၏မူဘောင်ကိုဤကိုးကားချက်ဖြင့်ချမှတ်ခဲ့သည်။
လက်မှတ်ရစီမံချက်ဖြင့်စစ်ပြန်များအတွက် PMP သင်တန်းပေးခြင်း
စက်တင်ဘာလ 20, 2019 စက်တင်ဘာလ 19, 2019 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်	မှတ်ချက် Leave
ဝါရင့်၏ဘဝသည်အရပ်သားဘ ၀ နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ အရပ်သားတစ် ဦး ၏ဘဝသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြီးထွားမှုကိုလိုလားမှုဖြင့်မှတ်သားထားသော်လည်းရွေ့လျားမှုသည်စစ်ပြန်များအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကာလအတွင်းသာမကသာမန်အရပ်သားဘ ၀ သို့ကူးပြောင်းပြီးနောက်၌ပင်စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်မှာထင်ရှားသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကာလအတွင်းမြင့်မားသောအရည်အချင်းများကိုရရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ပြန်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စစ်ပြန်များနှင့် Opioid အကျပ်အတည်း - စစ်ပြန်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်အရင်းအမြစ်များစာရင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 18, 2019 စက်တင်ဘာလ 17, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
စက်တင်ဘာသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုကာကွယ်သည့်လဖြစ်သည်။ စစ်ပြန်ရေးရာဌာန (VA) နဲ့ကျွန်တော်ဟာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစု ၀ င်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုကာကွယ်ခြင်းသည်ရွာတစ်ရွာတွင်ရှိသည်။
VA၊ အခြားစစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများသည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန်နှင့်စစ်ပြန်များအားအကူအညီရယူရန်တိုက်တွန်းသည်။
ဝါရင့်သတ်သေအစီရင်ခံမှုထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း - အကူအညီရနိုင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 12, 2019 သြဂုတ်လ 12, 2019 ဒါန Matthews	4 မှတ်ချက်
ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များအကြားသတ်သေမှုနှုန်းမှာကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဟောင်း Leon Panetta လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကသဘောတူခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဝါရင့်သတ်သေမှုနှင့်ပတ်သက်။ ဒေတာမပြည့်စုံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ ရဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း” ကိုကျူးလွန်သောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများတွင်မပါဝင်ပါ။ စစ်ပြန်ရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန (VA) သည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပိုမိုမျှတစွာအစီရင်ခံရန်အသနားခံခဲ့သည်။
စစ်ပြန်အတွက်စိတ်ထိခိုက် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာ - ပိုမိုသုတေသနလိုအပ်သည်
ဇူလိုင်လ 31, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
စစ်ပြန်များတွင် CTE ကစစ်တပ်တွင်ကိုယ်ပိုင်“ ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းအကျပ်အတည်း” ရှိပြီး NFL နှင့်သာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ နာတာရှည်စိတ်ထိခိုက် encephalopathy (CTE) သည်ပြင်းထန်သောပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် ဦး နှောက်စိတ်ဒဏ်ရာများနှင့်ဆက်နွှယ်သောအန္တရာယ်ရှိသည့် neurodegenerative ရောဂါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်အလွန်အမင်းဒေါသကြီးသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စစ်ပြန်များအတွက်ဂစ်တာ: PTSD ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်နောက်ထပ်ကြီးစွာသောကိရိယာ
ဇူလိုင်လ 2, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
တေးဂီတသည်ပျော်စရာကောင်းရုံသာမကအလွန်ပင်ကုထုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ထောင်နှင့်ချီသောစစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းများသည်စိတ်ဒဏ်ရာလွန်ကာလ (PTSD) ဒဏ်ကိုခံစားကြရသည်။ တကယ်တော့စစ်ပွဲမှာသေဆုံးသွားတာထက်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပြီးကတည်းကစစ်သားတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့ကြတယ်
အီရတ်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲများမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ 2.6 စစ်ပြန်များသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုတိုင်းကိုနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေကြသည်၊ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်သစ်သားနှင့် acoustic ဂစ်တာ၏ကြိုးကြိုးများကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။ တေးဂီတ၏အနာပျောက်စေသောစွမ်းအားသည်စစ်သားများအားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စေသည်။
ဇြန္လ 26, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားအရောင်များကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ Old Glory” ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ Old Glory တွင်မွေးနေ့ရှိသည်။ အလံနေ့သည်ဇွန် ၁၄ ရက်တွင်ကျင်းပသည်။ ၎င်းသည် ၁၇၇၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအလံ၏ဒုတိယအနေနှင့်ကွန်ဂရက်ကွန်ဂရက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြည်းတပ်သည်ဤနေ့ရက်တွင် US Army ၏မွေးနေ့ကိုလည်းကျင်းပသည်။
(Wow!) ထောက်ခံသူ Greshun De Bouse သည်မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များနေ့™အား Fort Benning ၏နေအိမ်၌ကြေငြာချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
ဇြန္လ 20, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
ဝိုး! Ms. Greshun De Bouse သည်မရပ်မနားဖြစ်သည်! Greshun De Bouse သည်မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်သူရဲကောင်းများနှင့် ၄ င်းတို့နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုသေချာစေရန်အသိပညာနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုဇွန်လ ၃၀ တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပသောမသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များနေ့™သို့မဟုတ် DVDay နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့သည့်စစ်တပ်၏မြေးဖြစ်သူနှင့်မသန်စွမ်းသူစစ်ပြန်ထောက်ခံသူဖြစ်သည်ကိုသင်မှတ်မိနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမသန်စွမ်းမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုခံနိုင်ရည်နည်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အချိန်မီသတ်မှတ်ထားသည်။
မသန်မစွမ်းစစ်ပြန်များနေ့™ (ဒီဗီဒီ) သည်ဇွန် 30 #dvday630 ဖြစ်သည်
ဇြန္လ 17, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
အမျိုးသားရေးဇွန်လ 30 အပေါ်နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့သည် မသန်စွမ်းစစ်ပြန်နေ့™သို့မဟုတ် DVDay ™ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်မြတ်နိုးရသော“ မသန်စွမ်းသူ” စစ်ပြန်သူရဲကောင်းများ၊ သူတို့ရင်ဆိုင်ရသည့်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမသန်စွမ်းမှုလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုခံနိုင်ရည်နိမ့်ကျသည့်အချိန်တွင်အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးရန်အထူးသတိပြုမှုနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုအထူးမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဂုဏ်ပြုခံရသည့်အားလပ်ရက်သည် PTSD အသိအမြင်နေ့နှင့်လွတ်လပ်ရေးနေ့တို့နှင့်လုံးဝကိုက်ညီပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းမသန်စွမ်းသူစစ်မှုထမ်းများအားအထူးဂရုပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်သတိရအောက်မေ့ပွဲနေ့။
မသန်မစွမ်းသောအမေရိကန်စစ်ပြန်များ (PVA) ~ သူတို့၏စိတ်ဓာတ်ရေးရာပုံပြင်များကိုကျင်းပသည်
ဇြန္လ 5, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
လေဖြတ်သောအမေရိကန်စစ်သူရဲကောင်းများ (PVA) သည်ကျောရိုးဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ရောဂါ (SCI / D) နှင့်အတူနေထိုင်သောစစ်ပြန်များ၏ခွန်အားနှင့်ဇွဲရှိမှုကို၎င်းတို့၏လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အပျက်များကိုမျှဝေခြင်းအားဂုဏ်ပြုသည်။
501 C3ကုသိုလ်ဖြစ်စစ်ပြန်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ (VSO) ဖြစ်သော PVA သည်စစ်ပြန်ရေးရာဌာန (VA) နှင့်လက်ချင်းချိတ်။ အလုပ်လုပ်သည်။ ကျောရိုးဒဏ်ရာရသောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများသည်အားကစား၊ အလုပ်အကိုင်၊ သုတေသနတိုးတက်မှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်မသန်စွမ်းသူများအတွက်လက်လှမ်းမီသောဒီဇိုင်းများမှတစ်ဆင့်အပြည့်အဝနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဘဝများဖြင့်နေထိုင်နိုင်စေရန်သူတို့အတူတကွကြိုးစားကြသည်။
စစ်ပြန်တစ် ဦး နှုတ်ဆက်: အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ဖို့ဂုဏ်ယူပါတယ်
မတ်လ 28, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီကစစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏စင်တာတွင်စကားပြောဆိုရန်နှင့်ဖျော်ဖြေရန်ဖိတ်ကြားခံရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိသည်။ အဆိုပါစင်တာကိုအထူးစွမ်းရည်အားလုံးနှင့်လူတန်းစားပေါင်းစုံ၏သက်ကြီးရွယ်အိုများအဘို့အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ စင်တာသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏မိသားစုများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအားလုံခြုံစိတ်ချရသောသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးခဲ့သည်။
မတ်လ 15, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြtreatmentနာများအတွက်ကုသမှုခံယူနေစဉ်စစ်ပြန်များသည်မကြာမီကလေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလိမ့်မည်။ စစ်ပြန်ရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန (VA) သည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုအကူအညီရရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဤအကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။ အောက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း (HR 840) သည်တိုးချဲ့ပြီးအမြဲတမ်း 2011 ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်စစ်မှုထမ်းကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရန်ရှာလိမ့်မည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မတ်လ 14, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဒါန Matthews	မှတ်ချက် Leave
2019 အတွက်ဂါထာသည်“ အမှုတော်ဆောင်သူများကိုအစေခံခြင်း” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမစ်ရှင်အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဤဂါထာကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူကိုစိန်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
“ အမှုဆောင်သူတွေကိုအစေခံခြင်း” လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်မတို့ကိုပိုလုံခြုံအောင်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိသမျှလုပ်ဆောင်သူအားလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်“ America of Great ကိုစောင့်ရှောက်ပါ!” ၏ကျောရိုးသည်အားလပ်ရက်များ၌ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်အလံနှင့် "ဘယ်သူမှတစ် ဦး တည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိ" ဟူသောစကားလုံးပါသည့်ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းထံမှတီရှပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။